Inodzivirira WhatsApp kubva pakuponesa mifananidzo nemavhidhiyo kune yako reel | IPhone nhau
Kana iwe uchiri akatendeka kuWhatsApp uye uchiita hurukuro dzako nechombo ichi, unogona kunge uine iyo Shamwari chaiyo inoramba ichikutumira mifananidzo inosetsa nemavhidhiyo, panguva iyo ivo vanogona kukukonzera kuseka, asi ivo vanochengeterwa mune yako iPhone foto reel uye, zvishoma nezvishoma, kukusiya usina nzvimbo yemifananidzo inokunakidza.
Kana tangoisa WhatsApp pane yedu iPhone, iyo application inongozvimisikidza nhevedzano yekusavimbika tsika, tsika idzo muzviitiko zvakawanda hadzisi dzatinoda uye tinomanikidzwa kuchinja. Chimwe chezvinhu zvinoshungurudza isu chatinowana natively muWhatsApp ndeye iyo otomatiki kuponesa kwemavhidhiyo uye mafoto pane yedu reel.
Zvirokwazvo vazhinji venyu munozviwana muri muboka reshamwari, mhuri, masangano, mapoka ezvikoro ... mune iyo yakawanda nhamba yemavhidhiyo nemifananidzo zvakagovaniswa. 99% yezvinyorwa zvakagovaniswa muboka iri zvinogona hatifariri kuichengeta, ichiri kuchengetwa pane yedu reel.
Neraki, WhatsApp inotibvumidza kumisikidza iyo application kuti isabise otomatiki kuchengetedza kwemifananidzo nemavhidhiyo pane yedu reel. Iyi sarudzo, iyo inofanirwa kuve inogoneswa natively, inotibvumidza isu kusarudza ndeipi mhando yezvinyorwa zvatiri kuda kuchengeta pane yedu reel.
Otomatiki yekuchengetedza basa reWhatsApp kwete chete shandisa nzvimbo yekuchengetera pane chishandiso, asi zvakare shandisa yako mobile data rate. Ose ari maviri zvikonzero zvakanaka kudzora iyi sarudzo.
Iyo mhinduro Icho chiri nyore kwazvo uye kana ukasazopedzisira uchichifarira, iwe unogona kugara uchigamuchira kuponesa nhanho idzi zvakare.
1 Regedza otomatiki chengetedza mafoto nemavhidhiyo pane iPhone
2 Maitiro ekuchengetedza WhatsApp mapikicha kune imwe dura
3 Bvisa WhatsApp Mapikicha kubva ku iPhone kuenda kuPC
3.1 Kana isu tisina kubvumirana iCloud nzvimbo
Regedza otomatiki chengetedza mafoto nemavhidhiyo pane iPhone
Chekutanga pane zvese, tisati taita ichi chiito, isu tinofanirwa kuziva kuti kana tichigadzirisa otomatiki kuchengetedza kwemifananidzo nemavhidhiyo pane iyo iPhone haina kukanganisa mapoka chete, asi zvakare kune hurukuro dzatinadzo nevamwe vanhu, kungave nababa vedu, amai, mudiwa, mwanakomana, shamwari ...
Kana isu tichida kudzivirira kwedu terminal yakazara nemafoto nemavhidhiyo ezvisina maturo zvinogoverwa mumapoka eWhatsApp patiri, isu tinofanira kuita anotevera matanho:
Chekutanga pane zvese, kana tangovhura WhatsApp, tinoenda kusarudzo ye Setup, iri mukona yezasi yekurudyi kwechishandiso.
Wobva wadzvanya pa Chats
Mukati meChats menyu, isu tine zvatinogona sarudzo dzakasiyana. Pane zvese zviripo isu tinofanirwa kudzima switch Sevha kuMifananidzo.
Nenzira iyi, kana tangobvisa switch iyi, mifananidzo yese nemavhidhiyo aunotitumira hazvizo chengetwa otomatiki pane yedu reel. Kana isu tichida kuzvichengeta, isu tichafanira kutevera anotevera matanho:
Kana tangova mumufananidzo watinoda kuchengetedza, tinobaya pairi kuti inoratidzwa yakazara skrini.
Tevere, tinya pane bhatani mugove, iri mukona yezasi yekuruboshwe.
Kubva pane dzakasiyana sarudzo dzakaratidzwa, tinosarudza Chengetedza. Nenzira iyi, mufananidzo kana vhidhiyo yeiyo WhatsApp chat ichave yakachengetwa pane yedu reel.
Maitiro ekuchengetedza WhatsApp mapikicha kune imwe dura
iOS, kusiyana neAroid, isa imwe neimwe yemifananidzo muhomwe imwe chete izvo zvinopera pane reel yechigadzirwa chedu, chimwe chinhu chingave chakanaka kana chakaipa zvinoenderana nekushandisa kwatinoita kwetinogumira uye kuti toda kuti mifananidzo ifanirwe zvakanaka kana kwete.
Ndichiri paApple, WhatsApp mapikicha uye mavhidhiyo zvakachengetwa muWhatsApp foldaMuIOS, mifananidzo yese yakachengetwa mufaira rimwe chete, sarudzo yega yekugona kuvasiyanisa kubva kune vamwe vese ndeye kushandisa dambarefu rine zita reWhatsApp iro rinogadzirwa nemashandisirwo patinoiswa.
Kana tangove mukati meiyo WhatsApp dambarefu, tichawana ese mafoto nemavhidhiyo atakatambira kuburikidza neyekutumira mameseji inotibvumidza kuita zviito navo takabatana sei kudzima, kugovana, shandura dambarefu ...
Bvisa WhatsApp Mapikicha kubva ku iPhone kuenda kuPC
Kana iwe uchida kugadzira backup kopi yemifananidzo yese nemavhidhiyo pane chako chishandiso kuti uzvichengete pakombuta kana kunze kwekuchengetedza system, isu tinayo nzira dzakasiyana dzekuzviita.
Nekusachengeta WhatsApp mafoto mune akapatsanurwa maforodha, asi mune maalbum anogadzirwa otomatiki kana uchiwedzera tag kumufananidzo Hatigone kubatanidza iPhone yedu nePC uye kuteedzera iyo folda kana albha iri mubvunzo.
Neraki isu tine yedu nzira dzakasiyana dzekugona kugovana mifananidzo yeWhatsApp album nesu kuti tikwanise kurodha paPC yedu sekuita nevamwe vanhu. Nekudaro, muchinyorwa chino isu tinongokuratidza iyo inokurumidza nzira uye dzakasununguka zvachose kukwanisa kuita kudaro, nekuti mafomu ayo anotipa basa iri anogara achibhadharwa.
Kana isu tikashandisa iyo iCloud yekuchengetedza sevhisi, maitiro acho anokurumidza zvikuru, nekuti ese mafoto nemavhidhiyo atove kuwanikwa muICloud. Kugona kuvasvikira kuburikidza neICloud uye kurodha pasi pakombuta yedu, isu tinongofanirwa tevera nhanho idzi:
Tinonanga ku WhatsApp album aripi mapikicha nemavhidhiyo atinoda kugovana.
Tevere, tinya pane bhatani mugove iri mukona yezasi yekuruboshwe kwechidzitiro.
Pakupedzisira tinodzvanya pane sarudzo Kopa chinongedzo kubva kuICloud. Chinongedzo chichagadzirwa zvakafanana neizvi https://www.icloud.com/photos/#06_dH1mCq9ZSSpNYWS_kRaADCEQ.
Ichi chinongedzo icho ichave ichiwanikwa kwemwedzi kurodha pasi uye inogona kuwanikwa nechero ani, nekuti haufanire kupinda chero nguva kuti uwane.
Kuburikidza neiyi link, iyo tinogona kuitumira netsamba, tinogona kuwana ese mafoto uye mavhidhiyo eWhatsApp ari mukati meiyo WhatsApp albha.
Kana isu tisina kubvumirana iCloud nzvimbo
Kana isu tisina kondirakiti yekuchengetera nzvimbo muICloud, kupfuura iyo 5 GB iyo yaanotipa mahara, maitiro aya anononoka, sezvo mudziyo wedu uchizobata kuisa kuICloud mifananidzo yese yatakatosarudza, zvinoenderana nenhamba yavari uye neinternet connection yatinayo, inogona kugara nguva yakati rebei kana shoma.
Iyo chete yekuganhurirwa iyo yatinowana kana isu tisina yemahara yekuchengetera nzvimbo kontrakiti neICloud ndeyekuti isu tinogona chete kugovana mafaera nemavhidhiyo kubva kune kwedu reel izvo zvakazara usapfuure 200 MB.
WhatsApp yave iyo iyo inonyanya kushandiswa mameseji papuratifomu (kunyangwe isiri iyo yakanakisa nekuda kwechikonzero ichi, Teregiramu iri iko kunyorera mameseji kunotipa iyo yakanyanya kuwedzerwa kukosha) uye ndicho chakanyanya kukanganisa kuti SMS yakamira kuva nzira inobatsira kwazvo yekutaurirana kune vanoshandisa nhare, kunyanya kupera kwese , umo mamirioni emessage akatumirwa.
Asi WhatsApp haina kungova nzira huru yekutaurirana kune vanopfuura mamirioni chiuru nemazana mashanu evashandisi vanoishandisa mazuva ese, asi yakavewo nzira huru yekugovana zvese mifananidzo nemavhidhiyo nekukurumidza uye nyore, mavhidhiyo ayo kana tisingangwaririre nguva dzose anopera kumusoro pane kwedu reel. Isu tinovimba kuti nedzidziso yedu iyo matanho ekutevera kudzivirira WhatsApp kubva pakuponesa mifananidzo nemavhidhiyo kune rako reel.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Dzivirira WhatsApp kubva pakuponesa mifananidzo nemavhidhiyo kune yako reel
Fuck. Icho chitsva. Ehe peji iri zuva rega rega rinopa zvirinani zvinyorwa. Tarira kuchema ...
Pakutanga, ndakafunga chinhu chimwe chete ichocho, asi ndakazorangarira mapepanhau emitambo, ayo anofanirwa kubuda mangwanani ega ega akazara nenhau, kunyangwe kana pasina nhau ... Zvisinei, pamwe mumwe munhu anga asingazvizive uye anga ari kufara
Chaizvoizvo Carmen, iri rinenge riri jee handiti?
Panguva ino uye kuti iwe unopa iyo "bullshit" yeruzivo, haina kukodzera kuburitsa chinyorwa.
Pakati paCristina uye ikozvino iwe ... chimwe chinhu chiri kutadza pane ino webhusaiti !!
Pane ino webhusaiti, iPhone nhau dzinopihwa, kazhinji zviitiko zvazvino, asi kune avo vanopinda nekuti vangotenga iyo iPhone uye votanga neyakajairika mashandisirwo uye kuda kuziva kweanouya. Izvi zvinoreva kuti ndinofara kuti iwe unozviziva, asi havazi vese vanozviita uye hapana munhu pane ino blog anonyorera muverengi mumwe chete, asi yenzvimbo umo mune avo vachazoda ruzivo urwu nevaya vasingarwuzive.
Kana zviri zvekuparadzaniswa kwevakadzi, zvinonetesa kuti iwe unogara uchitsoropodza vasikana isu patakawana chinzvimbo pano padhuze nevamwe varume vanoshanda navo, chirevo ichi chinotaura zvakawanda nezvako kupfuura nezvewebhu.
Kwazisai uye senguva dzose, ndatenda nekupindura.
jorker haana kuita bonde kutaura, akangotaura chokwadi. Zvekuti iwe naCristina ndimi vanyori vanyori havana chekuita nezvebonde, izvo zvakangoitikawo. Carmen, usazvidya moyo, hapana ari kukurukura nzvimbo yawakawana pakati pevarume.
Mhoro vatengesi. Ndinoda kuziva kuti nei software isingagone kugadzirwa kuitira kuti iPhones dzichengetedze WhatsApp mafoto mune rakasiyana dura kubva kumifananidzo iyo inotora neiyo kamera yeiyo iPhone. Chii chiri chikonzero?.
Kwandiri inhau huru, nekuti tarisa kuti ndatsvaga pamhepo sarudzo dzekuti usave nemifananidzo yakasviba iyo yavanowanzo kukutumira na Whatsaap uye vanoenda vakananga kune reel uyezve kana iwe uchiedza kuratidza yakajairwa foto iwe unofanirwa enda unorwa navo
chii chinonzi bullshit yeAritculo ...
Pindura kuna josevr
Zvakanaka, zvakandibatsira, sezvo ini ndaisamuziva. Ndatenda.
Elkin gomez perez akadaro
Kutenda neruzivo, ini ndaitozviziva asi ndinoziva kuti kune vazhinji vashandisi vatsva kana kuti vasina ruzivo rwakanyanya muIOS izvo kwavari chino chinyorwa chinozobatsira. Kune avo vari kunetsekana kana kuti vanga vachitoziva kana vasingafarire chinyorwa ... Ndokumbirawo ... USAVARENGE UYE KUTI UDZIKE KURASIKANA YAKO INOKOSHA NGUVA ... Tinofanira kuremekedza nguva nekuzvipira kwevanhu vese vanoburitsa zvinyorwa. pane ino webhusaiti uye usaite zvirevo zvisina hunhu, zvebonde, zvisingafadzi kana izvo zvisingashande kuvandudza iri peji rakakura.
Pindura Elkin Gomez Perez
Kana iwe usingazive iyi sarudzo, imhaka yekuti hauna kumboshandisa WhatsApp. kana usati wambove ne smartphone inokwanisa kumhanyisa WhatsApp Sezvo iyi sarudzo inowanikwa zvese muIO, Android, BB, WP, Nokia ...
Chinyorwa Chakanaka, kune avo vaisaziva, vagara vachiziva uye kune avo vanoiziva, vanozvisimbisa ...
Ngatirangarirei zvekutanga, ino webhusaiti yakatsaurirwa kune iyo iPhone, chero chinhu chine chekuita nacho, chakakosha kana ruzivo, uchaiona ichirembera pano ...
Havasi vese nyanzvi, havazi vese vashandisi vekare, kuremekedza kuitira kuti vafare ...
Avo vanofarira kushoropodza basa reumwe, nekuti havaiti yavo peji reWEB, vanonyora izvo zvinofanirwa kunge zvichinakidza uye zvitsva, tsvaga mumwe munhu anovagamuchira izvo zvinodzivirira yakawanda yekushambadzira kwekushambadzira, iyo ine zvirinani kuona kunaka uye ndeyekuravira kwe "MUNHU WESE". Ahhhh, usakanganwa chikamu chemashoko uye usabvuma kutsoropodza kwekutsoropodza kwevanyori kana zvikonzero zvakapusa zvekunyora kwakashata.
Pindura kuna Josegv
Mune ino kesi, hazvina kushata kuti nguva nenguva idzi mhando dzezvinyorwa dzinoiswa, nekuti sekutaura kwaCarmen havazi vese vari kubvaruka neiyo iPhone uye hapana chinoitika kurangarira kana kudzidzisa zvimwe zvinhu, izvo zviri pachena kune vamwe, zvinogona batsira vamwe
Kune vese Negative Bhora vanoshoropodza pano kuti Vakadzi vanonyora chaidzo maChorreadas anoitwa nemakwesha nekupinda muPost Llegenle kwete maMMEN.
Kutanga mumusoro hazvina kunaka kana kujeka. Nenzira iyo iwe yaunotaura, iwe haunzve kunzvenga kuchengetedza mafoto pane rako reel, nekuti haugone kunyatso dhawunirodha, kusvikira iwe pachako upe iyo vhidhiyo / pikicha wega kuti utore. Asi kana izvi zvangoitwa, zvinovaponesa pane vanodzedzereka zvakadaro.
Uye kana iri nhau, iwe unogara uchinonoka, kuteedzera uye kudhonza nenzira yakaipa semuturikiri ... Semuenzaniso, mutambo uyo Nacho ari kutaura nezvake wave muchitoro kweinenge vhiki. Nezve iyo Behaeve Recognition Server, mazuva mana apfuura ndakaiverenga mu appleinsider… .etc, nezvimwe
Ndiregerere, mutambo hausi kubva kweinenge vhiki rapfuura, ndewe17 / 7. Ndine hurombo.
Zvakanaka, zvakanaka, Aitor, ikozvino unoenda unozvimonera, kana muhupenyu huno haugone kukwiridzira nekuti zvinoitika zvinoitika.
Uye chii chakaitika? Ichokwadi here kuti mutambo uyu ndewe svondo rapfuura? Ndakaona kuongororwa kwemutambo uyu svondo rapfuura futi. Izvo hazvireve kuti mazuva manomwe apfuura, hapana chimwezve, ini ndanga ndichida kujekesa. Largemouth? Dzikisa muzambiringa.
Mhoro Aitor, sezvo iwe wakataura nezvangu mumashoko ako, ini ndichaedza kukupindura. Kuongororwa kwekushandisa hakusi kwazvino, kuri pamusoro pekugona kuburitsa maapplication nemitambo iri muApp Store zvisinei nekuti vanga vaine nguva yakareba sei varimo. Kana isu tichiedza kuongorora zvakasarudzika, tinozviratidza, zvimwe zvacho hazvifanirwe kunge zviri izvo.
Uyezve, ini pachezvangu ndinoda kudhonza raibhurari repepanhau uye nguva nenguva ndinosimbisa kubwinya kwekare kusisiri mumatanho uye nekuda kwehunhu hwayo, inofanirwa kurangarirwa kune avo vashandisi vaisazviziva panguva iyoyo.
Ndakati, usatarisira kuti ichiongorora mafomu achangosvika paApp Store nekuti kunze kwezviitiko zvisingawanzoitika kana makesi chaiwo, izvo hazvisi kuzoitika. Basa redu rinodzidzisa uye iro rekubatanidza nhau dzakanangana neiyo iPhone nenzvimbo yayo, kwete wese munhu ane RSS feed ine makumi maviri neshanu sosi yekuziviswa sekondi yega yega. Tine izvo mune vashoma kunyangwe zvichitaridzika neimwe nzira kwauri.
Mhoro, kutanga kwazvose, ita kuti vazive kuti ndinoremekedza uye ndinoyemura basa ravo. Ini handisi kuyedza kuve mune yakashata kuravira, kana troll, kuvenga, kana chero zvakadaro. Ehe, iwe unofanirwa kuedza usati waita chero ongororo chero chinyorwa chiri mubvunzo. Ichokwadi zvakare kuti havazi vese vashandisi vanoziva yega yega uye yega yeanoshanda eatominal yavo, uye kune izvo isu tiri pano uye iwe uripo.
Hakusi kutsoropodza kunoparadza, asi semuenzaniso, muchinyorwa chimwe chete ichi unowana chakanyorwa chakadai sekuti: «…, izvi hazvireve kuti iwe unogona kuenderera mberi nekuvachengeta nemaoko.», Ndingazvitsanangure here? Hazvinzwisisike.
Pamashoko ekare, idem, muchibvumirano chose mukununura "mbiri dzekare", zvinodikanwa kuti tizive kwatakabva, sekutaura.
Zviri pachena Aitor, ndinonyatsonzwisisa chinzvimbo chako uye kushoropodza kunovaka kunogamuchirwa zvakanaka. Ini ndaingoda kujekesa zvishoma nzira yedu yekushanda uye ndezvekuti kunyangwe isu tichiedza kumhanyisa kwazvo, dzimwe nguva nekuda kwekushaya nguva, mashedhi (mazhinji nhau anotibata tichirara kuSpain) kana kungorongeka, zvinhu zvinotora nguva kuti ibude yakaburitswa. Shuwiro yakanakisa!
Mhoro zvakare, Carmen, sekutaura kwako, kune vanhu vatsva kuIOS uye iPhone inoshanda system asi izvo zvinotaurwa naNoe ichokwadi, iyi haisi imwe sarudzo yeIOS sezvo izvi zvatoitwa mumapuratifomu mazhinji uye hazvisi zvitsva kana zvakakosha.
Unogona here kufungidzira uchigadzira chinyorwa chinotsanangura mabviro ekupedzisira nguva online kana chimwe chinhu chakafanana, iwe unotiita mapenzi nekutsikisa zvinhu izvi uye handifunge kuti vazhinji vashandisi vari.
Kana iwe wakakanganisa paunenge uchitsikisa, hapana chinoitika, kungozvibvuma chete kwakakwana uye musoro wenyaya wapera.
Zvino chimwe chinhu chandiri kuona kazhinji kwazvo mukudhindwa kwezvinyorwa, chichemo chekusaisa sosi kubva kwaunoteedzera, kudzokorodza nekunamatira zvinyorwa.
Ini pachokwadi handizvitendi uye ndinoisa semuenzaniso, kuti muChinese anoshanda muFoxconn, anosefa mimwe mifananidzo uye anoitumira kwauri chaizvo.
Izvo iwe zvaunoita zvakashata, sezvo iwe uchibiridzira zvirimo zvemamwe mawebhusaiti uye uchizvitsikisa pano, izvo mutaundi rangu zvinonzi kuba basa revamwe.
Yese webhusaiti ine mbiri inoisa zvirimo sosi, kana zvisiri vanhu, sekutaura kwevamwe vashandisi, vanowira mukukanganisa kwekufunga kuti ndeyako.
Kutora kukodzera kweumwe hakuna kunaka, ngatizvininipise uye tirege kukanganwa kuti zvinhu zvakagadzirwa zvakanaka zvinogara zvichioneka uye chokwadi chine nzira imwe chete.
Mhoroi, chokwadi ndechekuti tsananguro iyi yakandibatsira, asi nepakati, ivo vakangondipa iphone uye chokwadi ndechekuti ini ndaigara ndine garaxy, saka handizive kuti ndingaishandisa sei, asi mugirazi mifananidzo yemakamera yaive yakachengetwa mufaira, Facebook mune imwe uye wassap mune imwe, saka kana mumwe munhu akatumira chimwe chinhu chine hukama hwepabonde uye ini ndairatidza mapikicha andakatora nekamera yangu kunhengo yemhuri, ndaisazoona mafoto avakange vanditumira. iphone inoichengeta zvese pamwe chete. Saka ini ndaida kuziva kana paine nzira yekuti mapikicha achengetwe otomatiki mumafaira akasiyana?
Manheru akanaka, pane parizvino sarudzo yekuvaponesa vasina kuve 1 mu1? nekuti 1 ne1 kana ndikawana sarudzo yekuchengetedza pane reel asi kana ndikasarudza akati wandei hazvindibvumidze.
Mangwanani akanaka, mubvunzo, kwechinguva ini handikwanise kuchengetedza mufananidzo kubva kuchikumbiro kuenda kufoni, ini ndinodzvanya pamufananidzo kumusoro kurudyi uye zvinongondikanda sarudzo yekugovana kumeso, chii chandinoita?
Zvakandishandira !!!!! Ndatenda !!! =)))
Kutenda kwandiri zvakandishandirawo zvakanaka !!
Ndiri kutsvaga maitiro ekusa chengetedza iwo mafoto pane reel nekuti ini ndanga ndisingazive, uye chinyorwa ichi chiri kuratidzwa, rega kukanda zvakaipa uye kuverenga chete zvinokufadza, shamwari.Ndatenda Carmen nemhinduro yako! Bss
Ndinokutendai nekuitumira. Zvakandibatsira zvikuru. Ini handinzwisise zvisina kunaka zvirevo kana kushoropodzwa kwechinhu chakanaka. Tinofanira kuva nemafungire ari nani kana tichida kushandura nyika nechizvarwa chedu.
Nezve iyo tel. Ko iPhone ichakwanisa kusevha mapikicha kubva kune wasap mameseji nemifananidzo inogadzirwa neayo kamera mune akasiyana maforodha?
Ndinokutendai zvikuru, chinyorwa ichi chakandibatsira kwazvo. Kwazisai;
Pindura kuna Lazaro
Iyo shoma stock yezvipenga zvikamu zveApple Watch Series 3 inogona kukupa iwe neChina 4
Apple inoburitsa iOS 12.4 Beta 2